KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Onyankopɔn bɔfo baa Daniel nkyɛn (1-21)
Mikael boaa ɔbɔfo no (13)
10 Persia hene Kores ahenni afe a ɛto so abiɛsa mu no,+ Daniel a na wɔsan frɛ no Beltesasar+ no nyaa oyikyerɛ bi. Ná asɛm no yɛ nokware, na na ɛfa ɔko kɛse bi ho. Ɔtee asɛm no ase, na nea ohui no, wɔma ohuu mu yiye. 2 Saa bere no, me, Daniel, na madi awerɛhow+ nnawɔtwe abiɛsa. 3 Nnawɔtwe abiɛsa no nyinaa, manni aduan pa biara, na nam ne nsã biara anka m’ano, na mamfa ngo ansra. 4 Bosome a edi kan no da a ɛto so 24, bere a na mewɔ asubɔnten kɛse Tigris* ano no,+ 5 memaa m’ani so, na mihuu ɔbarima bi a ofura nwera,+ na na Ufas sika kɔkɔɔ abɔso* bɔ n’asen. 6 Ná ne nipadua te sɛ sikaberebo,+ n’anim te sɛ anyinam, na n’ani te sɛ ogyatɛn* a ɛredɛw. N’abasa ne ne nan te sɛ kɔbere a wɔatwiw ho,+ na ne kasa gyigye te sɛ nnipadɔm nne. 7 Me Daniel, me nko ara na mihuu nea ɛkɔɔ so wɔ anisoadehu no mu.+ Mmarima a wɔka me ho no de, wɔanhu bi. Nanso wɔn ho poe kyɛ-kyɛ-kyɛ-kyɛ, na woguan kohintawee. 8 Afei de, na aka me nko ara. Bere a minyaa saa anisoadehu kɛse no, ahoɔden biara anka me mu, meyɛɛ hoyaa, na m’ahoɔden nyinaa sae.+ 9 Na metee sɛ ɔrekasa. Nanso bere a metee sɛ ɔrekasa no, mefaa mu dae hatee a na m’anim butuw fam.+ 10 Na obi de ne nsa kaa me,+ na opusupusuw me ma mesɔree, na mede me nsa ne me nkotodwe sisii fam. 11 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “O Daniel, woyɛ ɔbarima a wosom bo paa;*+ yɛ aso tie asɛm a merebɛka akyerɛ wo yi. Afei sɔre gyina baabi a na wugyina no, efisɛ wɔasoma me wo nkyɛn.” Bere a ɔkaa saa kyerɛɛ me no, mesɔre gyinaa hɔ, na na me ho repopo. 12 Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: “O Daniel, nsuro.+ Efi da a ɛbaa wo koma mu sɛ wobɛte asɛm no ase, ɛda a ɛbaa wo koma mu sɛ wobɛbrɛ wo ho ase wɔ wo Nyankopɔn anim no, saa da no na wɔtee w’adesrɛ no, na w’adesrɛ no nti na maba.+ 13 Bere a mereba no, Persia ahemman no birɛmpɔn+ besiw me kwan nnafua 21. Nanso Mikael*+ a ɔka abirɛmpɔn atitiriw no ho no* bɛboaa me, na metenaa Persia ahemfo no nkyɛn wɔ hɔ. 14 Maba sɛ merebɛma woahu nea ɛbɛto wo man wɔ awiei nna no mu,+ efisɛ anisoadehu no yɛ daakye asɛm.”+ 15 Bere a ɔkaa asɛm yi kyerɛɛ me no, misii me ti ase, na mantumi ankasa.* 16 Ɛnna obi a ɔte sɛ onipa de ne nsa bɛkaa m’ano,+ na mibuee m’ano ka kyerɛɛ nea ogyina m’anim no sɛ: “Me wura, anisoadehu no ama me ho repopo, na ahoɔden biara nni me mu.+ 17 Enti ɛbɛyɛ dɛn na w’akoa atumi ne ne wura akasa?+ Efisɛ seesei ahoɔden biara nni me mu, na ɔhome biara nni me mu.”+ 18 Na nea ɔte sɛ onipa no de ne nsa kaa me bio, na ɔhyɛɛ me den.+ 19 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “O ɔbarima a wosom bo paa,*+ nsuro.+ Asomdwoe nka wo.+ Yɛ den, yiw, hyɛ wo ho den.” Bere a ɔne me kasae no, minyaa ahoɔden na mekae sɛ: “Me wura, kasa, efisɛ woahyɛ me den.” 20 Ɛnna obisaa me sɛ: “Wunim nea enti a maba wo nkyɛn no? Seesei meresan akɔ na me ne Persia birɛmpɔn no+ akɔko. Sɛ mekɔ a, Greece birɛmpɔn no nso bɛba. 21 Nanso mɛka nsɛm a wɔakyerɛw wɔ nokware nhoma no mu akyerɛ wo. Obiara nni hɔ a ɔtaa m’akyi denneennen wɔ eyinom mu, gye Mikael,+ mo birɛmpɔn no.+
^ Nt., “Hidekel.”
^ Anaa “obi a wɔdɔ wo paa; obi a wonni wo ho agoru.”
^ Ɛkyerɛ, “Hena Na Ɔte Sɛ Onyankopɔn?”
^ Anaa “abirɛmpɔn no panyin paa.”
^ Anaa “metɔɔ mum.”
^ Anaa “ɔbarima a wɔdɔ wo paa; ɔbarima a wonni wo ho agoru.”